Niato ny vaksinin'ny COVID-19 any Hong Kong
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Hong Kong » Niato ny vaksinin'ny COVID-19 any Hong Kong
Noho ny fonosana tsy nety, dia nampandre an'i Hong Kong sy Macau androany ny mpanamboatra alemana Pfizer-BioNTech momba ny olana misy amin'ny sarony amin'ny vaksinina tokana 210102 Cominarty.
Ny governemanta Hong Kong dia diso amin'ny lafiny fitandremana ary mampiato ny andiany faharoa - isa 210104.
Raha ny filazan'ny profesora iray ao Hong Kong dia tsy misy porofo manamarina fa mitera-doza amin'ny fiarovana izany olana izany.
Manaraka i Macau fa mbola mampiato ny andiana tifitra voalohany.
Ho fitsinjovana ny filaminam-bahoaka dia naato ny vaksinin'ny COVID-19 any Hong Kong satria eo am-panaovana famotorana ny olan'ny famonosana vaksin 2 karazana tsy mendrika. Ny vaksinin'ny BioNTech dia tsy maintsy tehirizina amin'ny -70 degre Celsius, ary ny kinova vita sinoa avy any Sinovac ihany no vaksiny 2 misy any Hong Kong amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny talata 8 alina, Hong Kong Ny antontan'isan'ny governemanta dia nampiseho olona 403,000, na 5.3 isan-jaton'ny mponina tao an-tanàna, no nanao vaksiny. Amin'ireo dia 150,200 252,880 no nahazo ny tifitra vaksinin'ny BioNTech voalohany, raha XNUMX kosa ny an'ny Sinovac.
Ny departemantan'ny fahasalamana dia tokony hanao fivoriana maika momba ity tranga ity miaraka amin'i Fosun Pharma, izay manatitra ny jab izay novolavolain'i BioNTech sy Pfizer fanafody goavam-be amerikana.
Roa ora teo ho eo talohan'ny fanambarana nataon'ny governemanta Hong Kong, Macau nanamafy fa ny mponina ao aminy dia tsy handray vaksinina amin'ny andiany 210102 ihany koa. Ny fampandrenesana iray avy amin'ny governemanta Macau dia nilaza fa na dia tsy mitera-doza aza ireo vaksinina voalaza ireo dia nangataka ny fampiatoana ny BioNTech sy Fosun mandra-pahatanterak'izy ireo vita ny fanadihadiana.
Nilaza i Ho Pak-tangan, mpahay mikrôbiolojika ao amin'ny Oniversiten'i Hong Kong, fa handray fepetra fitandremana toa an'i Macau ihany ny tanàna, saingy nanamafy kosa ny profesora fa tsy misy porofo milaza fa misy loza ateraky ny fiarovana amin'ny olana fonosana.
Ny sary navoaka tao amin'ny media sosialy dia nampiseho famantarana teo ivelan'ny ivon-toeran'ny vaksininy Hong Kong izay nilaza fa antenaina hanao fanambarana manokana ny governemanta ny alarobia ho avy izao momba ny asany.
Fenway Hotel dia nanambara ny Tale Jeneraly vaovao